तपाईलाई थाहा छ ? कति होला सफल सेक्सको अवधि ? | Rajmarga
मानिसहरु दावी गर्छन् कि मेरो सेक्स अवधि ३० देखि ४० मिनेटसम्म चल्छ । तर, यो दावी गर्नेहरुको भनाइमा सत्यता हुँदैन ।
अमेरिकाको पेन्सिलभेनियास्थित बेहरेन्ड कलेज इन एरीका शोधकर्ताहरुका अनुसार सामान्यतः ३ मिनेटको समय यौन आनन्दका लागि पर्याप्त हुन्छ । बढी समयको कुरा गर्ने हो भने ७ देखि १३ मिनेटको समय अधिक डिजायरेबल हुन्छ । तर, पूर्वीय संस्कृति, युनानी किस्सा वा स्टप–स्टार्ट प्रविधिलाई मान्ने हो भने ३० देखि ४० मिनेटको समय पनि सही हुन सक्छ ।
अमेरिकाको टेक्सास विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुका अनुसार सेक्सका लागि प्रेरित गर्ने २३९ हुन्छन् । प्रेम प्रकट गर्न वा लगाव व्यक्त गर्न सुरुवाती १० कारणमध्ये एक हो । के त्यसो हो भने प्रेमको मूल पनि सेक्स नै हो ? शोधकर्ताहरुका अनुसार महिलाहरु कुनै महिला वा श्रीमानसँग बदला लिन पनि सेक्स गर्ने गर्दछन् । यसप्रकारको इच्छाले लिभ इन रिलेशनसीपजस्तो सम्बन्ध कायम हुने गर्दछ ।
तर, एउटा अर्को शोधका अनुसार सेक्सका कारण आँक्सिटाँसिन हर्मोन हो । यो हर्मोन्सले प्रेम र सेक्सलाई बढावा दिने गर्दछ । यसलाई ‘लभ’ हर्मोन्स पनि भन्ने गरिन्छ । तर, यो शोधले पनि विरोधाभाष नै बढाएको छ ।
सेक्स र मोटोपन
बेलायतका करिब ३ हजार जनामा गरिएको सर्वेका अनुसार १० मध्ये १ महिला मोटोपनको शिकार थिए । उनीहरुले स्वीकार गरे कि पछिल्लो सालभरमा उनीहरुले सेक्समा कुनै भूमिका निभाएका थिइनन् ।
उनीहरुको यौन जीवन निकै तनावपूर्ण थियो । सर्बेका अनुसार मोटी महिलाहरु बेडरुममा त्यति कन्फिडेन्ट पाइएनन् जति दुब्ला पातला महिला हुन्छन् । यसको मुख्य कारण मोटी महिलाहरु आफ्नो लुक्सका विषयमा कन्फिडेन्ट हुँदैनन् । उनीहरु हीन भावनाबाट ग्रस्त हुने गरेका हुन्छन् ।
Previous post: उत्तर कोरियाली नेता किम दक्षिण कोरियामा, आज शिखर वार्ता, यस्तो छ तयारी
Next post: कक्षा १२ को परीक्षा शुरु, चारलाख १५ हजार विद्यार्थी